RF ကြေးဝါ induction အပူစက်ထုတ်လုပ်သူ | induction အပူဖြေရှင်းချက်
induction Brazing စက်
၁။ IGBT module နှင့်ပထမမျိုးဆက်၏ inverting နည်းပညာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
2. ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပေါ့ပါး။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
၃။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလုပ်လုပ်ရန်၊ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုလေ့လာရန်လုံလောက်သည်။
၄။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ မကျွမ်းကျင်သောလူကအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အပူချိန်နှင့်အပူချိန်၏သက်တမ်း၊ အပူချိန်နှင့်လည်ပတ်မှုအချိန်တို့နှင့်မိုးရွာသည့်ကာလတို့၏အားသာချက်များ၊ ရိုးရှင်းသောအပူကွေးကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းမော်ဒယ်လ်သည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်သုတ်သင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
6. သီးခြားမော်ဒယ်များအချို့ကိစ္စများ၏ညစ်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် fit မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
DW-MF-35Induction Generator ကို
DW-MF-45 induction အပူလှံတံ Forge အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-70 induction အပူလှံတံ Forge အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-90 induction အပူလှံတံ Forge အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-110 induction အပူလှံတံ Forge အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-160 သော induction အပူလှံတံဖေါက်ခြင်းမီးဖို
DW-MF-15 သော induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-25 သော induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-35 သော induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-45 သော induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-70 သော induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-90 သော induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-110 induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-160 induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို
DW-MF-110 induction ခိုင်မာစေသည့်ပစ္စည်း
DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-6KW-B က
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား နည်းပညာများ Tags: HF ကြေးနီပစ္စည်းကိရိယာများ, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း brazing, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကြေးနီယူနစ်, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction brazing, မြင့်မားသောအကြိမ်ရေဂဟေအပူပေးစက်, သော induction brazing, induction ကြေးနီပစ္စည်းကိရိယာများ, induction brazing မီးဖို, သော induction brazing အပူပေးစက်, သော induction brazing စက်, သော induction brazing ဖြစ်စဉ်ကို, induction brazing စနစ်, ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကြေးနီကြေးဝါ, ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကြေးနီအပူပေးစက်, RF brazing, RF ကြေးဝါစက်
induction အတူလျောက်ပတ်သောကြေးဝါမှကြေးနီ Tube Brazing
Objective: တစ် preform braze ဝါယာကြိုးသုံးပြီးသင့်လျော်ကြေးဝါတစ်ကြေးနီပြွန် braze မှ induction အပူကိုအသုံးပြုဖို့ရန်။ အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ခုနိုက်ထရိုဂျင်၏လေထုနှင့် 4% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ braze preforms 1190 ° F ကိုမှာအရည်ပျော်ပေမယ့်အစိတ်အပိုင်းများကို 1300 ° F ကိုအောကျတှငျထားရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှုန်းအပူအချိန် 175 စက္ကန့်စရာတစ်နာရီလျှင် 200 မှ 18 တစ်မှုနှုန်းမှာလုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၀.၅″ OD နှင့် ၂″ အရှည်ရှိသောကြေးနီပြွန်၊ ကြေးဝါတပ်ဆင်ခြင်း၊
1190 အထက်အပူချိန် 1300 ° F ကိုကျော်လွန်ဖို့က F °သော်လည်းမ
ပစ္စည်းကိရိယာ: သုံး (10) busses,3μFစုစုပေါင်းရှစ် (8) capacitors နှင့်တစ်မူထူးခြားသောလေးအလှည့် helical ကွိုင်နှင့်အတူ DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-0.66KW output ကိုအစိုင်အခဲပြည်နယ်သော induction အပူ power supply ။ helical ကွိုင်အောက်ပါရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ထူးခြားတဲ့လေးအလှည့်နှင့်အတူအဆိုပါ DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-10KW output ကိုအစိုင်အခဲပြည်နယ် power supply ကို process ။
အဆိုပါမေတ္တာရပ်ခံလေထု•ရလဒ်များ 95-5 cfh တစ်မှုနှုန်းမှာ 25% နိုက်ထရိုဂျင် / 30% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထောက်ပံ့နေဖြင့်တစ်ဦးခေါင်းလောင်းအိုးတလုံးအောက်မှာပေးထားခဲ့သည်။ •သာ 10 စက္ကန့်များ၏တစ်ဦးကအပူသံသရာ 18 စက္ကန့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ကန့်သတ်မှီနိုငျသောလုံလောက်သော braze စီးဆင်းမှုမှီရန်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား နည်းပညာများ Tags: Brazing ကြေးဝါကိုသငျ့, Brazing ကြေးဝါကိုပိုက်, brazing ကြေးနီပိုက်, သော induction နှင့်အတူကြေးနီပြွန် Brazing, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Brazing သောကြေးဝါ, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Brazing ကြေးနီ, RF brazing, RF သော induction brazing ကြေးနီပြွန်